Te Hanampy Olona i Timoty | Ampianaro ny Zanakao
Tia nanampy olona i Timoty. Nandeha tany amin’ny toerana maro izy, mba hanaovana an’izany. Tena nahafinaritra ny fiainany. Te hahafantatra ny tantarany ve ianao?...
Nampianatra an’i Timoty momba an’i Jehovah ny reniny sy ny bebeny
Nipetraka tany Lystra i Timoty. Mbola kely izy dia efa nampianarina momba an’i Jehovah. I Loisa, bebeny, sy Eonika, reniny, no nampianatra azy. Te hanampy olona hahafantatra an’i Jehovah izy rehefa lehibe.
Nasain’i Paoly hiaraka aminy hitory tany amin’ny toerana maro i Timoty, tamin’izy mbola tanora. Nanaiky izy, satria te hanampy olona.
Niaraka tamin’i Paoly nankany Tesalonika, tanàna any Makedonia, i Timoty. Nandeha an-tongotra lavitra be izy ireo ary avy eo nandeha sambo. Nanampy olona maro hianatra momba an’i Jehovah izy ireo tany. Tezitra tamin’izy ireo anefa ny olona sasany, ka nitady hamono azy. Tsy maintsy niala tao àry izy ireo, ary nitory tany an-toeran-kafa.
Nahafinaritra ny fiainan’i Timotye
Nasain’i Paoly niverina tany Tesalonika i Timoty, volana vitsivitsy taorian’izay, mba hitsidika an’ireo rahalahy tany. Nampahatahotra izany satria nampidi-doza ilay tanàna. Te hahafantatra an’izay nanjo an’ireo rahalahy anefa i Timoty ka nandeha ihany. Nilaza tamin’i Paoly izy rehefa niverina fa nanompo an’i Jehovah tsara ireo rahalahy tany Tesalonika.
Niara-niasa tamin’i Paoly i Timoty nandritra ny taona maro. Nanoratra momba azy i Paoly, ary nilaza fa izy no olona tsara indrindra azony nirahina hanampy ny fiangonana. Tia an’i Jehovah mantsy izy, ary tia olona.
Inona no ianaranao avy amin’i Timoty?... Hanana fiainana mahafinaritra ianao raha tia olona sy manampy azy ireo hianatra momba an’i Jehovah.
Taiza i Timoty no nipetraka?
Nanaiky hiaraka tamin’i Paoly ve i Timoty? Nahoana?
Nahoana i Timoty no niverina tany Tesalonika?
Hizara Hizara Te Hanampy Olona i Timoty